Mareykanka oo soo riday diyaarad aanay cidina wadin oo Iiraan ay leedahay | Xaysimo
Home War Mareykanka oo soo riday diyaarad aanay cidina wadin oo Iiraan ay leedahay
Mareykanka oo soo riday diyaarad aanay cidina wadin oo Iiraan ay leedahay
Waxa uu sheegay in markabka USS Boxer “uu isdifaacay” Khamiistii kaddib markii diyaarad aanay cidina wadin ay u soo jirsatay 1,000 yaardi.
Goor sii horraysay, Tehraan ayaa waxa ay sheegtay inay qabatay “markab ajnabi ah oo nooca shidaalka qaada ah” iyo 12 shaqaale ah oo saarnaa oo Axaddii shidaal si qarsoodi ah kaga saarayay Gacanka.
Isagoo ka hadlayay Aqalka Cad ayuu Trump yiri: “Waxaan doonayaa inaan qofwalba u sharaxo dhacdo maanta ka dhacday marinka Hormuz oo uu ku lug leeyahay markabka dagaal ee USS Boxer.
“Markabkan Boxer ayaa waxa uu iska difaacay diyaarad aanay cidina wadin oo Iiraan ay leedahay taas oo aad ugu soo dhawaatay, masaafo dhawna u soo jirsatay, qiyaastii 1,000 yaardi, iyadoo diyaaraddu iska dhegatirtay baaqyo ahaa inay degto sidaana ay halis ku galisay badqabka markabka iyo howlwadeennadii saarnaaba. Si degdeg ah ayaana diyaaraddaasi lagu burburiyay.
“Tani waa tallaabadii daandaansi iyo cadawtinimo ee ugu dambaysay oo ay Iiraan ku qaadday maraakiib ka howlgalaysay biyaha calaamiga ah. Mareykanka waxa uu xaq u leeyahay inuu difaaco askartiisa, qalabkiisa iyo danahiisa.”
Markabka ayaa waxaa lagu qabtay koonfurta jasiiradda Larak ee Iiraan, sida ay Iiraan sheegtay.Image captionCiidammada Ilaalada Kacaanka Iiraan oo gaafwareegaya marinka Hormuz
Iiraan ayaa sidoo kale soo riday mid kamid ah diyaaradaha dusha kala socdo amniga gobolka xilli ay mareysay marin biyoodka Hurmuz, xukuumadda Tehran waxay sheegtay in diyaaraddaas ay kusoo xaadgudubtay hawada Iiraan, wixii dhacdadaas ka dambeeyay “Waxay farriin cad u dirtay Mareykanka.